बोसो बढी भएको मासु खाँदा एलडिएल कोल्डस्ट्रोर, ट्राइग्लिसिराइडको मात्रा बढ्ने उनले बताए । खतिवडाले भने, “पोलेको, भुटेको र अधिक बोसो भएको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।” बोसोरहित मासु कम खान उनको सुझाव छ ।
कसरी सम्भव छ महासमाधि ?
काठमाडौं । उत्तरायणको समयमा योगीहरूले आफ्नो आध्यात्मिक प्रक्रियातर्फ केही नयाँ प्रयासहरू गर्छन्, किनकि उत्तरायण भनेको कृपा र बद्धत्त्वको समय हो । प्राचीन समयदेखि नै थुप्रैले होशपूर्वक आफ्नो शरीर छोड्नको लागि विशेषगरी
प्रशान्त क्षेत्र सामुद्रिक प्राणीका लागि 'प्लाष्टिक ठूलो बासस्थान !
न्यूयोर्क । वैज्ञानिकहरुले खुला सागरको एउटा क्षेत्रमा प्लाष्टिकको थुप्रोमा बस्ने समुद्री जनावरहरु पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुले सो क्षेत्रलाई ग्रेट प्यासिफिक गार्वेज प्याच बताएका छन् । सो प्याच क्यालिफोर्नियाको तटदेखि पश्चिमी
काठमाडौं । लिङ्ग निर्माण गर्ने विज्ञान भित्री अनुभवबाट जन्मिएको विज्ञान हो, जुन हजारौँ वर्षदेखि रहिरहेको छ । तर, पछिल्लो ८/९ सय वर्षमा, विशेषगरी जब यहाँ भक्ति-आन्दोलनको लहर फैलियो, मन्दिर निर्माणको
काठमाडौँ । मलेसियामा विश्वको सबैभन्दा दोस्रो अग्लो टावरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा २२२७ फित अग्लो ११८ तले टावर २०२२ को अन्तिमसम्म संचालनमा आउने भएको हो ।